Ahoana no To Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina | Save A Train
Home > Travel Europe > Ahoana no To Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina
ny Carissa Rawson 06/03/2020
Train Tsidika, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 04/04/2020)
Ny Coronavirus nipoaka be no mahatonga ny fiahiana ny olona manerana izao tontolo izao, fa angamba iray amin'ireo olana lehibe indrindra dia ny hoe miatrika mpandeha. Satria Travel drafitra dia sarotra ny hiova sy matetika tapakila efa namandrika, dia mety ho dikany bebe kokoa ho anao hanohy amin'ny drafitra fa tsy ny fanafoanana. Raha misafidy ny hanao izany, manararaotra ireo toro-hevitra mba hahazoana antoka fa mandeha soa aman-tsara ianao nandritra ny Coronavirus valan'aretina sy mahazo ny rehetra Corona vaovao farany.
Rail Transport no Eco-Friendly sy azo antoka indrindra Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
voalohany, inona marina no Coronavirus? Tena disadisa ny tsimok'aretina izay ahitana izany aretina taovam-pisefoana toy ny taovam-pisefoana Afovoany Atsinanana Syndrome (MERS) ary mafy Matsilo Syndrome taovam-pisefoana (SARS). Amin'ity taona ity no lazaina hoe tantara foronina Coronavirus COVID-19 ka dia inoana ho Avy ao amin'ny faritanin'i Hubei ny tanibe Shina, tao an-tanànan'i Wuhan. Izy io dia tena areti-mifindra amin'ny hatsiaka-toy ny soritr'aretina, anisan'izany ny tazo, aretin-tenda, mikohaka, ary ny runny orona. Koa satria voalohany tonga fankasitrahana tamin'ny Janoary, ny aretina dia niely manerana an'i Asia be sy ny sisa amin'izao tontolo izao, miantraika firenena toa an'i Japana, Korea Atsimo, Italia, Etazonia, ary Iran. Izany no nahatonga Travel famerana na Travel advisories maro tianao, na dia maro aza dia mbola azo iainana kokoa noho ny mandeha.
Ahoana no To Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina?
Raha ny Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) Nampitandrina nonessential efa mandeha ho an 'ireo firenena voakasika be indrindra, ny ankamaroan 'ny izao tontolo izao dia ny mahita voafetra, raha misy toe-javatra. The World Health Organization efa hita fa COVID-19 ny Fahasalamam-bahoaka Concern Emergency ny iraisam-pirenena fa tsy areti-mifindra, izay midika hoe afaka foana amin'ny olona Travel drafitra ianao, raha mitandrina. Mitondra fanampiny fotsiny fikarakarana foana ny toro-hevitra ara-pahasalamana amin'ny fampiasana ireo:
Soso-kevitra 1: Get rehetra vaksiny
Na dia toa mazava, zava-dehibe mba hahazoana antoka fa ianao nahazo ny vaksiny rehetra alohan'ny manomboka ny Travel. Mba hahita izay tifitra ianao no mila mandeha eo anatrehanao, tsidiho ny tranonkalan'ny CDC vaovao ho an'ny fahasalamana. Ny fanaovana antoka ianao ho voaaro amin'ny aretina sorohina maro araka izay azo atao ny fanalahidin 'ny fitandremana ny hery fiarovana mafy.
Soso-kevitra 2: Ento Disinfecting mamafa
Ny sasany amin'ireo ratsy indrindra mipoitra, efa hita ao amin'ny toerana amin'ny fifandraisana akaiky, toy ny natokan-toerana Diamond Princess sambo fitsangantsanganana any Japana, izay mifototra fotsiny sisa tavela any ivelan'i Tokyo. Raha toa ianao mandeha ihany koa anivon'ireo mpandeha maro hafa, toy ny amin'ny fiaramanidina, ho azo antoka foana ny faritra madio. Ento sy antibacterial mamafa sy manadio ny faritra rehefa tonga. Tafiditra amin'izany ny mikosoka ny armrests, cupholders, lovia latabatra ary misy faritra izay ianao ho fibodoana.
Soso-kevitra 3: Foana ny Tananao Clean Raha te-Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina
Raha maro ny olona no miezaka ny Halaviriko ny otrik'aretina amin'ny alalan'ny face saron-tava, amin'ny zava-misy, dokotera nahita ireo manao kely ny na inona na inona mba hiaro anao salama. fa tsy, manasa tanana matetika no hita fa mahomby indrindra amin'ny nitoetra salama. Raha mandeha ianao any ho any izay matetika dia tsy ho afaka sasao ny tanana, tanana fa tsy hitondra sanitizer ary mampiasa azy io matetika.
Ao amin'io ihany fihadiana, foana ny tanana eny ny tavanao, ary hiala eo am-bavanao sy ny maso. Ireo no faritra Mety kokoa ho anao ny mahazo ny aretina.
Soso-kevitra 4: Get Travel Insurance
Raha toa ianao US-monina, be dia be ny karatra manolotra naorina-in Travel fiantohana, na ianao no mila ny hijery amin'ny karatra issuer mba hahitana raha nipoaka ny vaovao dia miafina Coronavirus. Fa ny olon-drehetra, na izany aza, ianao no mila manampy fividianana Travel fiantohana raha tranga voamarina ny otrik'aretina nanomboka popping ka niely any amin'ny firenenao ny mandeha.
Izany ihany koa dia miitatra ny tendron'ny averina Travel, toy ny saran-dalana, trano fandraisam-bahiny, ary Tours. Na dia mety ho vidiny upfront bebe kokoa ny boky, ny manovaova ny manana drafitra Travel averina afaka handoavana ireo vola be raha toa ny fanafoanana.
Soso-kevitra 5: Halaviro ny Vahoaka!
Manam-pahaizana ara-pahasalamana efa nampitandrina fa ny virosy Niely fiaraha-monina amin'ny alalan'ny fifandraisana, izay midika hoe tokony hijanona any amin'ny toerana Feno araka izay azo atao. Izany mampihena ny hatsiaka ny marary. Mazava ho azy, manintona mpizaha tany no mazàna mba hisarihana vahoaka, fa tokony mbola ho afaka fitsidihana mandritra ny vanim-potoana eny-tendrony rehefa mpitsidika ambany. Ao amin'ny toerana toa an'i Paris, izany dia mety midika mitsidika ny tranom-bakoka Louvre amin'ny fanokafana na aloha kelin'ny fa tsy akaiky ny afovoan'ny ny andro fizahan-tany fifamoivoizana tampon'isa.
Mazava ho azy, dia mety ho tsy afaka tanteraka tsy vahoaka, indrindra fa amin'ny fety. Raha ny ankamaroan 'Eoropa dia haingana Nofoanana ny fety toy ny Italia ny Carnivale ary na dia ny Mobile World Expo Kaongresy ao Espaina.
Soso-kevitra 6: Karakarao tsara ny tenanao
Travel dia somebiseby erỳ, fantatsika rehetra fa. Na izany aza, haingam-pandeha ny handeha toetry ny mandeha dia tsy midika fa mila mihazakazaka tena reraka mitety. Mety ho toa mahafinaritra mba hamoha amin'ny hirika ny maraina ary mitodi-doha avy mandra-misasakalina, fa zava-dehibe mba hahazoana antoka ianao, tandremo ny tenanao eo afovoan'ny ny fahafinaretana rehetra. Nahoana? Satria ampy torimaso sy sakafo ara-pahasalamana ny vatanao hoe afaka hiaro tena hanohitra aretina. Izany no zava-dehibe indrindra ho an'ireo izay mora kokoa ny aretina, toy ny be taona na ireo izay manana rafi-kery fanefitra ahitana.
Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina – Fehiny
Raha misy tokoa ny ahiahy ho an'ireo izay efa namandrika mandeha mandritra izany fotoana izany, misy fomba ho anao ny handeha soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus valan'aretina. The COVID-19 mifindra, fa maro ny firenena no tsy mbola tratran'ny, ary mbola azo antoka ho an'ny lavitra. Raha toa ianao ka mikasa ny mitohy miaraka amin'ny ny vakansy, mampiasa ireo toro-hevitra mba hitandrina ny tenanao salama. Ataovy azo antoka ianao ka hihinana matory ampy tsara, mahazo ny ilaina rehetra vaksiny, manadio ny faritra manodidina anao amin'ny famonoana bibikely, ka tandremo ny Travel drafitra malefaka. Buy Travel fiantohana sy ny faritra Aza Feno araka izay azo atao, ary indrindra mba fantany. Tandremo ny tenanao raha tena vonona ny Coronavirus mipoitra, miseho ho any amin'ny firenenao.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba handeha soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus valan'aretina dia amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby – mankafy ny tsy hanahirana sy ny fiarovana ny mandeha lamasinina sy ny fampiasana Save A Train!
Tianao ve ny bilaogy hiraketana ny lahatsoratra hoe "Ahoana no Travel soa aman-tsara nandritra ny Coronavirus tratran'ny valanaretina?” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/travel-safely-coronavirus/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ho / tr na / en sy ny maro hafa fiteny.
Business Travel ny Train, fiara Travel torohevitra, Train Tsidika, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe
Milan To Roma Miaraka amin'ny lamasinina Trenitalia
Train Tsidika, Train Travel Alemaina, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe